नारायण गोपालको हातमा नपरेको पहिलो फिल्म अवार्ड « News of Nepal
बुबा स्व. भरतलाल श्रेष्ठ विशाल बजार लायन्स क्लबका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला यो लायन्स क्लब विभिन्न समाजसेवामा निकै सक्रिय थियो । तर अहिलेजस्तो त्यसबेला सञ्चारमाध्यम धेरै नभएकाले जति समाजसेवा गरे पनि क्लबको भने खासै चर्चा हु“दैनथ्यो । मैले भने भर्खर–भर्खरै कामना पत्रिकाको काम शुरु गरेको थिए“ । कामनाले छोटो समयमै पाठकको मन जितेर लोकप्रियता कमाइसकेको भए पनि मनोरञ्जनप्रधान पत्रिका भएकाले लायन्स क्लबका गतिविधिहरू यसमा समावेश हु“दैनथ्यो अथवा भनौं समावेश गर्न मिल्दैनथ्यो ।
विशाल बजारमा हाम्रो आफ्नै एउटा पसल पनि थियो । व्यापारिक सिलसिलामा बुबा त्यसबेला प्रायः विदेशतिर गइरहने भएकाले जेठो छोराको नाताले पसल हेर्नेे जिम्मेवारी मेरो नै भन्दा हुन्थ्यो । त्यसैले लायन्स क्लबका प्रायः सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू बुबा अध्यक्ष हुनुभएकै कारणले पनि हाम्रो पसलमा आइरहन्थे । त्यसमध्ये जोस–जा“गर भएका केही युवा पदाधिकारीहरू क्लबले गरेका योगदानबारे पत्रपत्रिकामा पनि आइदिएहुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्थे र, यस विषयमा मस“ग सल्लाह मागिरहन्थे । आफूले गरेका योगदान धेरैले थाहा पाइदिए थप प्रोत्साहन मिल्थ्यो भन्ने चाहना हुनु एउटा मानवीय स्वभाव पनि हो ।
आफ्नो स्वभावका कारण धेरै जनास“ग हिमचिम गर्न नरुचाउने नारायण गोपालस“ग छोटो समयमै घनिष्ठता बढ्नुको पनि रमाइलो कारण छ । उहा“ले शुरु–शुरुमा रेडियोमा गाउनुभएका केही गीत उहा“स“ग नरहेको र ती गीतहरू खोजिरहनुभएको थाहा पाएपछि मैले आपूmस“ग घरमा रहेको क्यासेटबाट सारेर दि“दा उहा“ धेरै प्रसन्न हुनुभएको थियो । भन्नुहुन्थ्यो– ‘तिमी त सा“च्चिकै मेरो फ्यान रहेछौ ।’ हुन पनि म नारायण गोपालको गीत भनेपछि हुरुक्कै हुन्थें । त्यसैले काठमाडौं इकुबहाल घर भएकी मेरी ठूली आमाका छिमेकी गायक स्व. हरिबहादुर रञ्जितकारलाई अनुरोध गरी–गरी मैले नारायण गोपालका पाएसम्मका गीतहरू रेडियो नेपालबाट भरेर राख्ने गरेको थिए“ । गायक हरिबहादुर त्यतिबेला रेडियो नेपालकै कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । विशाल बजारमा आफ्नै पसल हु“दाको फाइदा उठाउ“दै गीत भरेर ल्याइदिएबापत त्यतिबेलाको नाम चलेको जापानमा बनेको टीडीके क्यासेट गायक रञ्जितकारलाई उपहार दिन्थें । उहा“ले पनि दंग पर्दै मैले भनेका गीतहरू रेडियोबाट भरेर मलाई ल्याइदिनुहुन्थ्यो ।
संयोगले जुरीबाट त्यसबेला निकै चलेको कान्छी चलचित्रबाट नारायण गोपाल नै सर्वश्रेष्ठ गायकमा छानिएको कुरा आयोजककै एक सदस्य भएको नाताले थाहा भएपछि अब यसैलाई आधार मानेर नारायण गोपाललाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनका लागि उहा“को महाराजगन्ज चक्रपथमा रहेको निवासमै भेट्न गए“ । गोप्य र प्राविधिक कारणले गर्दा तपाईं नै पुरस्कृत हु“दै हुनुहुन्छ भन्न नमिले पनि कूटनीतिक भाषाले घुमाएर यो कुरा उहा“लाई राख्दा अलि प्रोत्साहित भइदिनुहोला कि भन्ने आस थियो । तर उहा“ टसको मस हुनुभएन, झन् भड्किनुभयो । आश्चर्यको कुरा त के थियो भने, किन नआउने भन्ने कुरा पनि खोल्नुहु“दैनथ्यो । पैसाको कुरा भए पनि त खुलस्त भनिदिनुभए हुन्थ्यो नि ? त्यो पनि नभन्ने । यता क्लबमा सोधेको सोधेकै गर्थे । त्यो दिन पनि दिक्क भएर फर्कें ।
कार्यक्रम एउटा हाइटमा पुगेर टुंगिएकै कारणले होला, नारायण दाइलाई पनि आफ्नो अवार्डको लोभ जागेछ । कार्यक्रम सकेको केही दिनपछि उहा“ले नाताले आफ्नो भाइ पर्ने मान्छेलाई एउटा चिटसहित लायन्स क्लबमा अवार्ड लिन पठाउनुभयो । यसबारे अलमलमा परेका क्लबका पदाधिकारीले मस“ग आवार्ड दिने÷नदिने बारे सल्लाह मागे । उहा“हरूलाई मैले अवार्ड नै दिनुहुन्न त भनिन“ । तर त्यतिबेला नारायण दाइले गर्नुभएको व्यवहार सम्भि“mदै अवार्ड लिन उहा“ स्वयम् उपस्थित नभएसम्म अवार्ड अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको त्यो अवार्डकै अवमूल्यन गर्नु हो भन्दै अवार्ड रोकेको थिए“ । मलाई लाग्थ्यो, नारायण दाइको त्यो लायन्स अवार्ड अहिले पनि विशाल बजारस्थित लायन्स क्लबको कुनै दराजमा थन्किएको हुनुपर्छ, नभन्दै खोज्दै जा“दा त्यो भेटियो पनि ।
बलिउड अभिनेत्री सबाना आजमीलाई नेपाल ल्याउने कलाप्रेमी नरेन्द्र श्रेष्ठ
गायक नारायण गोपालसँग उहाँकै निवासमा लेखक
बलिउड अभिनेत्री सबाना आजमीको हातबाट सर्वकृष्ट अभिनेताको लायन्स अवार्ड ग्रहण गर्दै अभिनेता शिव श्रेष्ठ
बलिउड अभिनेत्री सबाना आजमीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै विशाल बजार लायन्स क्लबका संस्थापक अध्यक्ष स्व. भारतलाल श्रेष्ठ
प्रियंकालाई युनिसेफको अवार्ड
साउने झरीमा दयाहाङको यात्रा
नेपाली पासवर्डमा सन्नीको आइटम डान्स